musha nyika dzakabatana Singers Cardi B Kukura Kwemunhu Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeAmerican rapper anozivikanwa kwazvo sa “Cardi B". Yedu Cardi B Kukura Kwemwana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezvechisimba rake rap kuyerera uye pachena mazwi. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga nezveCardi B's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Cardi B Kurarama Kwepakutanga uye Yemhuri Ngano
Belcalis Marlenis Almánzar nyanzvi inozivikanwa saCardi B akazvarwa pazuva re11th yaGumiguru 1992 kuWashington Heights muManhattan, USA. Ndiye wekutanga pavana vaviri akazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake vadiki vanozivikanwa nababa - Carlos Almanza.
Iye mukurumbira rapper uyo anokwikwidza semunyori wenziyo uye mutambi wedzinza reDominican mhuri midzi. Yakawedzerwa kumhuri yekwaCardi B ndeyake Trinidadian midzi iyo inomuita iye nyika yeAmerica yedzinza rakasanganiswa.
Iwe unoziva here kuti mudiki Cardi B akakurira munzvimbo mbiri muNew York guta? vanosanganisira iyo Highbridge nharaunda yeSouth Bronx uye imba yaambuya vababa vake muWashington Heights.
Kukura munzvimbo yemhuri yepakati munzvimbo dzese, Cardi B mudiki aive akakomberedzwa nehunhu hwakashata hwakamudya izvo zvakamupa nezviitiko zvaanozopwanya mumakore mashoma anotevera.
Cardi B Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Imwe yemashoma maitiro akakosha ekurerwa kwaCardi B aive Madonna. Mumhanzi wemuimbi uyu waive wekurudziro kuna Cardi B uyo aimuremekedza sechifananidzo chehudiki.
Muchokwadi, Cardi B akaita Madonna's 'Material Girl' panguva yegore rake nyowani kuRenaissance High Chikoro cheMusical Theatre & Technology muNew York pamberi pehunhu hwechikwata neveRopa hwakamutangisa kutanga kuongorora kweye rap music genre.
Pakazosvika nguva yekubhuroka kwevachiri kusvika pakati pemakore gumi nematanhatu, iye aive achishandira kuMusika Amish muCorteca kwaaishandira seCashier. Paakabviswa pabasa rake kuchitoro chekutengesa, Cardi B akabvarura mitsetse senzira yekutiza hurombo uye kuva musikana wechidiki akazvimiririra.
Nekuda kwehunyanzvi hwebhizimusi rekutora, Cardi B akakwanisa kukwidza mari yaakawana kuzviita kuti anyore muBorough yeManhattan Community College. Akadzidza pachikoro ichi kwemashure mashoma asati abuda.
Cardi B Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Zvinonzi vanhu vane nzira dzekugadzira kuti iite hombe pamberi pfuma inopedzisira yanyemwerera pavari. Kune Cardi B, mazano ake anosanganisira kushandisa social media (Vine uye Instagram) kukurukura zvakajeka varume, s3x uye kuita mari. Cardi B akaunganidza vateveri vake vakavimbika kwazvo kubva pakuedza kwaakaita kuti arege kubvarura mari uye akatanga kuita mari nekutambira zviitiko zvekirabhu semufambi wepamhepo.
Izvo hazvina kutora nguva refu Cardi B's Instagram notoriety akamuchengetera iye chinzvimbo pachokwadi show Rudo & Hip Hop: New York. Kunyangwe Cardi B aingoonekwa pachiratidziro kwemwaka miviri, akazove anozivikanwa nekuisa imwe yeanonyanyisa kupokana pane iyo chaiyo show.
Cardi B Mugwagwa Wokurumbira Nhau:
Tumira chokwadi cheTv show yekuedza akaona Cardi B akabvuma zvakanyanya kuimba kwake rap mumhanzi sezvaakaratidzwa muShaggy's remixed single "Boom Boom", akaburitsa yake yekutanga mixtape - Gangsta B * tch Music, Vol. 1 uye vakabatana nevamwe mahip hop maartist kuburitsa iyo KSR Boka compilation - Isingafungidzirwe: Iyo Album.
2017 raive shanduko gore raCardi B uyo akaburitsa yake yechipiri mixtape, Gangsta B * tch Music, Vol. 2 uye akasaina chibvumirano neAlantic Records label. Atlantic Records yakaenderera mberi kuburitsa Cardi B yekutengesa imwe chete "Bodak Yero" iyo isina kungoita hutachiona chete asi yakamuita iye wechipiri mukadzi murapi pamusoro peBillboard Hot 100 chati ine solo yakabuda.
Cardi B Kukwira Kuzivikanwa Nhau:
Kunyangwe "Bodak Yero" yakahwina iyo Yega Yegore pa2017 BET Hip Hop Awards, Cardi B anga achiri kusingazivikanwe kudzamara aita mamwe mashoma kubatana, akadonhedza wechipiri asina kuroora - "Bartier Cardi" uye pakupedzisira akazarura damba rake rakamirirwa kwenguva refu. album, Kurwiswa Kwakavanzika (2018).
Iyo yekutanga dambarefu iro raive rakarova makwara senge "Ndinoifarira" uye mubatanidzwa weMaroon 5 "Vasikana Vakaita Iwe", rakatyora marekodhi mazhinji uye rakamuita iye chete mukadzi akahwina Mubairo weGrammy we Best Rap Album semuimbi wega. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Cardi B Hukama Hupenyu:
Kunze kwebasa rake reRap nemumhanzi, Cardi B anga aine mugove wake wakanaka wekufambidzana stints, muchato, kuparadzana uye kusangana zvakare. Isu tinokuunzira chokwadi nezve hupenyu hwerapie hupenyu kutanga neake ekare-mukomana. Zvinosuruvarisa, zvishoma zvinozivikanwa nezve vanhurume vaidanana nemurapi pakati pemakore 2015 - 2016. Ivo vanozivikanwa saMambo Yella, Tommy Geez uye DJ Self.
Muna 2017, Cardi B akatanga kufambidzana nemurapi Offset uyo waakasangana naye gore rapfuura. Shiri dzerudo dzakaroora muchivande kuGeorgia munaGunyana 2017 uye vakaita mwanasikana pamwechete - Kulture Kiari Cephus (akazvarwa muna Kubvumbi 2018) vasati vaparadzanisa munaZvita gore iro. Nekudaro, ivo vakagadzirisa fenzi uye vakabatanidzazve seimwe nekuda kwerudo uye vachipa mwanasikana wavo zvakanakisa zvehuyeukwa hwehudiki.
Cardi B Hupenyu Hwemhuri:
Mhuri ndipo panotangira hupenyu kuna Cardi B uye uko rudo rusingaperi kune rapper. Tinokuunzira chokwadi nezve kumashure kwemhuri yemunyori kutanga nevabereki vake.
Nezve baba vaCardi B:
Carlos Almanzar ndibaba vaCardi B. Iye anobva kuDominican yemhuri yemhuri uye akashanda semutyairi weTekisi kwenguva yakareba kwazvo. Carlos akaparadzaniswa naamai vaCardi B apo rapper aive akura 10 asi zvakadaro, akaramba achigona kusvika pakuyeuchidza vanasikana vake kuti achiripo. Cardi B haana hukama hwakakwana naCarlos asi anomupa mbiri yekuve murume akasununguka uye akanaka.
Nezve amai vaCardi B:
Amai vaCardi B vanogona kunge vachizivikanwa nezvese kunze kwezita ravo. Iye ndeweTrinidadian yemhuri midzi uye akabatsira kusimudza rapper nenzira yakaoma. Amai vevaviri vaive vasingatoziva nezve zvekubvisa kwaCardi B nekuti murapi akaichengeta sechakavanzika kubva kuna mai vake vaimuranga. Mazuva ano Cardi B haavanze chinhu kubva kuna amai vake avo vakadzidza kukoshesa kutendeseka kwemurapi.
Nezve hama dzaCardi B:
Cardi B haana hama yekuzvarwa asi hanzvadzi yeropa inozivikanwa saHennessy Carolina Almánzar. Hennessy terevhizheni uye yemagariro enhau hunhu uyo ​​ane zvido mukugadzira fashoni uye dhizaini. Chii chimwe? Hennessy akakurira pamwe nasisi vake vane mukurumbira uye achienda kuchikoro chesekondari. Akaenderera mberi nekuonekwa naCardi B paRudo & Hip Hop chaiyo terevhizheni franchise. Izvo zvinopera pasina kutaura kuti vese vanun'una vanodanana uye vanokoshesana.
Achienderera mberi kumadzitateguru aCardi B uye hupenyu hwakawedzerwa hwemhuri, iye ane vana baba vababa vatatu vanozivikanwa saNicauly Almànzar Villalona, ​​Maciel Almanzar naFernando Almanzar. Iko hakuna zvinyorwa zveva rappers vanasekuru nasekuru pamwe nasekuru nasekuru naambuya. Saizvozvowo hapana zvakawanda zvinozivikanwa nezve babamunini vaCardi B, babamunini uye babamunini nepo babamunini vake nababamunini vake vasati vazozivikanwa panguva yekunyora iyi biography.
Cardi B Hupenyu hweMunhu:
Ehe, Cardi B ane kutarisa kukuru kuti kutarisa kwe court, hunhu hwake hunotora moyo yevateveri vake. Hunhu hweCardi B hunodakadza munhu uyo ​​anotora kwaanobva kubva muLibra zodiac maitiro anosanganisira kutaura pachena, kuratidzira kwekusavimbika uye nzira yekugadzira yekugadzirisa matambudziko.
Taura nezve zvido zvemurapi uye zvekutandarira, anoda kufamba, kupembera, kutamba, kufambirana nezvirongwa zvepa terevhizheni, kusimbisa hukama hwake nemabhizinesi pamwe nekushandisa nguva yakanaka nevanhu vanofarira seshamwari dzake uye mhuri inotsigira.
Cardi B Mararamiro:
Nezve mashandisiro anoita Cardi B uye kushandisa mari yake, iye ane mari inofungidzirwa yemadhora gumi nemaviri panguva yekunyora iyi bio. Upfumi hunokurumidza hwaCardi B hune kwahwo kwakamisikidzwa mumimhanzi yake achiedza apo zvibvumidzo uye zvimwe zvibodzwa senge yake yekuunganidzwa kwembatya dzinomubatsira kutenga zvoumbozha mutorwa kune vazhinji vanotambira mihoro nemubhadharo.
Saka hazvishamise kuti ane motokari dzisingazivikanwe kusanganisira Bhiri Bentayga pamwe neyemamirioni mazana emadhora imba yakanaka kuAtlanta. Imba inofambiswa nemiti mirefu yakakodzera kuti peni imwe neimwe inoshandiswa mukuwanikwa kwayo sezvo Cardi asingatomboregi kutaura nezvayo nechido.
Cardi B Untold Chokwadi:
Kuputira yedu Cardi B nyaya yehucheche uye biography isu tinopa chokwadi chisina kunyatsoiswa mubio rake.
Simuka pamusoro pemitauro yake yemumhanzi, Cardi B muKaturike. Anoreurura kuva ne "hukama hwakasimba" naMwari pamwe nezvinyorwa zvekuti anotaurirana naye.
Cardi B aigara achiputa achiri kuyaruka asati atanga tsika iyi. Iye zvino anopa zano vasikana vadiki kuti vasiyane neutsi. Nekudaro, anopihwa kunwa zvine mwero doro.
Runyanzvi runyanzvi - Cardi B ipfupi kune raaimbove zita remadunhurirwa rekuti "Bercadi" (mhando yerum) Akapfupisa nick kuna "Cardi" uye akawedzera "B" nekuda kwenziyo.
Cardi B - ane anoshamisa kukwirira kwemashanu '5' - tsoka - ane akanaka maTattoo akaenzana akapararira kubva kumusoro wake kuenda kune tattoo. Iyo hunyanzvi hwemuviri husingasviki pane masere hunogona kungoonekwa chete kana achinge aimba mune zvemuviri uye leotard.
Cardi B ane zvido zvematongerwo enyika kunyanya mune iyo hutungamiriri hweUS. Anofarira kuverenga nhoroondo dzevagadziri uye kufungisisa nezvezvibairo zvavakaita kuti America ive huru.
Thanks for reading vedu Cardi B Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
VERENGA Mariah Carey Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Thanks for reading vedu Cardi B Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!